Pyae Phyo (MMiTD): ♪ Dell User များအတွက် Eastern iT and Mobile မှာ Special Discount ချနေပါပြီ ♫
♪ Dell User များအတွက် Eastern iT and Mobile မှာ Special Discount ချနေပါပြီ ♫
➡️ 15US မှ 30US အထိ Discount
➡️ 1 Year DELL Official Warranty
(y) AEON နဲ့ Installment ၀ယ်နိုင်သလို, AYA / CB/ KBZ
Credit Card များဖြင့်လည်း ၀ယ်ယူနိုင်ပါသည်။
(1) DELL inspiron 3462 (Celeron)
500GB HDD / 4GB DDR3 / DVD RW
WiFi, Webcam , Bluetooth
ရောင်းဈေး => 269US(365,000Ks)
Word ,Excel ,Photoshop Power Point , Pagemaker ,internet , email စတာတွေအသုံးပြုဖို့အတွက် သင့်တော်တဲ့ Laptop လေးပါ။
(2) DELL inspiron 3462 (Pentium)
14'' LED / WiFi /Webcam / BT 4.0
ရောင်းဈေး => 349US(474,000Ks)
(3) DELL inspiron 3567 (i3 6th Gen)
AMD R5 M430 2GB Graphic
15.6'' LED / WiFi / WebCam
Bluetooth /4Cell Battery.
မူလရောင်းဈေး '=> 489US
Discount ချပြီးဈေး 469US ( 637,000Ks ၀န်းကျင်)
Core i3 Cpu နဲ့ Graphic 2Gb ပါဝင်တာမို့ AutoCad , 3D Max
DOTA2 , Video Editing, Photoshop တွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
(4) DELL Inspiron 5559 (i3 7thGen)
4GB DDR4 / 1TB HDD,
15.6" LED Display,
DVD RW, Wifi, Webcam,Bluetooth
Discount ချပြီးဈေး--> 419US ( 569,000Ks ၀န်းကျင် )
Core i3 7th Gen ကို အသုံးပြုထားပြီး 1TB HDD ပါတာမို့ Data တွေအများကြီးသိမ်းလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ DDR4 Memory ကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက် Word / Excel / Power Point / Accounting / PhotoShop / Email / internet တွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန် အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(5) DELL Vostro 3568 (i3 7th Gen)
1TB HDD/ 4GB DDR4 / DVD RW
AMD R5 M420 2GB Graphic
15.6'' LED / WiFi /WebCam , BT
Discount ချပြီးဈေး--> 484US ( 658,000Ks ၀န်းကျင် )
Core i3 7th Gen ကို အသုံးပြုထာားပြီး 1TB HDD ပါတာမို့ Data တွေအများကြီးသိမ်းလို့အဆင်ပြေပါတယ်။2GB Graphic ပါဝင်တဲ့အတွက် AutoCad / 3DMax / Photoshop / Video Editing နဲ့ Dota2လိုGame တွေကိုဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(6) DELL inspiron 3467 (i5 Graphic)
AMD R5 2GB Graphic
14'' Display , WiFi , Webcam , Bluetooth
Discount ချပြီးဈေး--> 539US ( 733,000Ks ၀န်းကျင် )
Core i5 7th Gen CPU ကိုအသုံးပြုထားပြီး 2GB Graphic လည်းပါဝင်တာမို့ AutoCad / 3D Max/ Revit / Video Editing/ Photoshop စတဲ့
လုပ်ငန်းများနဲ့ Dota2 လို Game တွေကိုလည်း ဆော့ဖို့အဆင်ပြေမယ့်
(7) DELL Vostro 3468 (i5 Graphic)
500GB / 4GB DDR4/DVD RW
AMD R7 M440 2GB Graphic
14'' LED / WiFi / WebCam / BT
Discount ချပြီးဈေး --> 554US ( 753,000Ks ၀န်းကျင် )
Core i5 7th Gen ကိုအသုံးပြုထားပြီး 2GB Graphic ပါဝင်တာမို့
AutoCad / 3D Max /Revit / Video Editing နဲ့ Dota2 Game တွေကို
(8) DELL inspiron 5468 (i5 Graphic)
500GB / 4GB DDR4 / DVD RW
14'' LED / WiFi / BT / Webcam
မူလရောင်းဈေး --> 579US
Discount --> 20US
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း --> 559US (760,000Ks ၀န်းကျင်)
Core i5 Cpu နဲ့လိုက်ဖက်ညီစွာ 4GB DDR4 နဲ့ AMD R7 2GB Graphic ပါဝင်တာမို့ AutoCad / 3D Max / Revit / Video Editing/
Photoshop/ Dota2 စတဲ့ Gameတွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။
(9) DELL inspiron 3567 (i5 Graphic)
15.6'' LED / WiFi / BT / Webcam
မူလရောင်းဈေး --> 589US
Discount --> 15US
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း --> 574US (780,000Ks ၀န်းကျင်)
Core i5 Cpu နဲ့AMD R5 2GB Graphic ပါဝင်တာမို့ AutoCad / 3D Max / Revit / Video Editing/Photoshop/ Dota2 စတဲ့ Gameတွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။
(10) DELL inspiron 5468 (i5 Win License)
AMD R7 2GB Graphic
14'' LED / WiFi /Webcam /Bluetooth
4 Cell Battery .
Window 10 64Bit license
မူလရောင်းဈေး --> 609US
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း --> 589US (801,000Ks ၀န်းကျင်)
Core i5 Cpu နဲ့AMD R5 2GB Graphic ပါဝင်တာမို့ AutoCad / 3D Max / Revit / Video Editing/Photoshop/ Dota2 စတဲ့ Gameတွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။ Window 10 64Bit license ပါဝင်တာမို့ Error ကင်းစင်တာမို့ အမြန်နှုန်းပိုမိုကောင်းမွန်မှာပါ။
(11) DELL inspiron 5567 (i5 7th Gen)
AMD R7 M445 2GB DDR5
15.6'' FULL HD / WiFi / WebCam
BT /3Cell Battery.
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး --> 659US
Discount --> (20US)
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း --> 639US (869,000Ks ၀န်းကျင်)
Core i5 CPU နဲ့အတူ မြန်နှုန်းမြင့် 2GB DDR5 Graphic ပါဝင်တာမို့
AutoCad / 3D Max / Revit / Video Editing/ Photoshop/ Dota2 စတဲ့ Gameတွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။
(12) DELL inspiron 5468 (i7 7th Gen)
1TB HDD / 8GB DDR4 /DVD RW
AMD R7 M440 2GB DDR3 Graphic
14'' LED / WiFi, Webcam, BT 4.0,
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး --> 679US
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း --> 659US (896,000Ks ၀န်းကျင်)
နောက်ဆုံးပေါ် Core i7 (7th Gen)ကိုလဲ သုံးချင်တယ်
Screen Size ကိုလဲကြီးကြီးမကြိုက်သူများအတွက် သင့်လျော်မယ့်
Laptop လေးဖြစ်ပါတယ်။ AutoCad / 3D Max / Revit / Video Editing/ Photoshop/ Dota2 စတဲ့ Gameတွေကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။
(13) DELL inspiron 5567 (i7 7th Gen)
1TB HDD/ 8GB DDR4
AMD R7 M445 4GB DDR5
WiFi , Webcam , BT 4.0
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး --> 739US
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း --> 719US (977,000Ks ၀န်းကျင်)
DELL ချစ်သူများရဲ့ Popular အဖြစ်ဆုံး Laptop လေးပါပဲ..။ ရောက်တာနဲ့
ကုန်တက်တဲ့ Laptop လေးပါ။ Specification လေးကလဲ အမြင့်ဆုံးတွေပဲဖို့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ i7 Laptop ပါပဲ။ Game ဆော့မလား..။ Engineer လုပ်ငန်း
သုံးမလား။ သုံးချင်ရာသုံးဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး Laptop လေးပါပဲ.။
(14) DELL inspiron 5567 (i7 7th Gen)
<3 Win 10 Pro 64Bit License
ဈေးနှုန်းကတော့ မူလရောင်းဈေး --> 819US
Discount ချပြီးဈေးနှုန်း --> 799US (10,86,000Ks ၀န်းကျင်)
သည်အလုံးလေးကတော့ အပေါ်က အလုံးထက် License Window ပိုပါပါတယ်။. Window Error ကင်းကင်းသုံးနိုင်တာမို့ ပိုမိုမြန်ဆန်ကောင်းမွန်မှာပါ။
ကျောက်တံတားမြို့ နယ်။ ဖုန်း 01- 398491, 09-782569031, 09-977921751
Eastern 3) (လှိုင်)တိုက်အမှတ်(51/B1)(အခန်း 001)၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီး။ ဘူတာရုံမှတ်တိုင် နှင့် သုခမှတ်တိုင်ကြား ၊ ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်းမျက်စောင်းထိုး။ ဖုန်း 01-516115 ,09-969 773 107
Email : easternict@gmail.com